janvier 2013 – filazantsaramada
» Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao, satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany. » Matio 20:15-16 Mialoha izao teny izao dia nisy fanoharana nataon’i Jesosy amin’ny fanjakan’ny lanitra, dia ny amin’ilay lehilahy tompon-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama mpiasa ho any […]
Publié parfilazantsaramada janvier 28, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Marina amin’ny ataony Andriamanitra
Fampakaram-bady tao Kana
« Ary tamin’ny andro fahatelo dia nisy fampakarambady tao Kana any Galilia; ary tao ny renin’i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy koa ho ao amin’ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin’i Jesosy taminy: Tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, moa mifaninona akory Izaho sy hianao? Tsy […]
Publié parfilazantsaramada janvier 18, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fampakaram-bady tao Kana
Ny kintana no nitarika ny Magy
« Dia nampaka ny Magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehoan’ilay kintana. Dia naniraka azy hankany Betlehema izy ka nanao hoe: Andeha, fotory tsarany amin’ilay Zazakely; koa rehefa hitanareo Izy, dia ambarao amiko, mba hankanesako any koa hiankohofako eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin’ny mpanjaka izy ireo dia lasa; ary, indro, ilay […]
Publié parfilazantsaramada janvier 11, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny kintana no nitarika ny Magy